Ukuba isikhumba sakho asikwazi ukubonelela nge-sebum eyaneleyo kwaye ngenxa yoko uziva unxibe, unomileyo, nakweminye imimandla yayo oyijonga ngayo, ngoko kwimeko enjalo kufuneka usebenzise i-masks yekhanda elomileyo, iirephepheni esinikezela ngazo nqaku.
Kodwa, ngaphambi kokuqhubela phambili kwiindlela zokulungiselela i-masks yolusu elomileyo, siza kujonga ngokuthe ngqo kwizinto ezinqwenelekayo zesiphene sokonkcenkcesha njengesikhumba esomileyo ebusweni kunye nemigaqo yokunyamekela. Ubume obuphambili kwesikhumba esomileyo lubukeka obunobunono obubonakalayo, iimbono ezibonakalayo ezingabonakaliyo, ukukhenkcezwa kunye nokwanda kwamandla kwizinto zangaphandle zempembelelo. Olu hlobo lolusu lubuhlungu kakhulu, xa isepha isetyenziswe ngexesha lokuhlamba. Ngoko ke, ukusebenzisa isepha kuyinqatshelwe. Enye inxalenye yesikhumba esomileyo ebusweni yimpembelelo enamandla yokubanda okanye ukushisa kuyo. Ngoko ke, ehlobo okanye ebusika, ulusu lufuna unonophelo olulodwa.
Isizathu sesikhumba esomileyo sinokuba yimibandela eyahlukeneyo. Oku kugugu, ukusetyenziswa ngokugqithisileyo kwee-agent zomileyo ngexesha lokuhlamba, impendulo iyafana enye kwesophu okanye i-alcohol lotions ebusweni. Kwakhona, unokuquka ukukhethwa kwezimonyo zokuzihombisa okanye ukhenketho lwesikhumba.
Njengoko sele sithethile, olu hlobo lesikhumba lufuna unonophelo olunzulu kwaye lunenyameko. Njalo kusihlwa, ngaphambi kokulala, umntu uyacetyiswa ukuba asuse ngobisi olukhethekileyo lobisi okanye enze isicelo sikhilimu ekhutheleyo. Umphumo omhle kakhulu unikeza uhlamba olukhethekileyo lobuso, olulula kwaye kulula ukuzilungiselela. Ukuze senze oku, sidinga igramu ezili-150 ze-ngulube kunye nama-drops angama-10 we-salicylic yotywala. I-fat fat i-pre-melted with a bath of steam, kwaye ke, xa iphosa, yongeza utywala uze uyixube. Sebenzisa lo mshicileli imizuzu emihlanu, ukuyisebenzisa kuwo wonke ubuso obuso. Emva koko, isuswe nge-cotton swab kwaye uhlambe ubuso kunye namanzi afudumele.
Ngendlela, ukuba uyayikhumbula, isepha kakhulu idlula isikhumba kwaye ngenxa yoko, imeko yayo ingahlahloka ngokuphawulekayo. Sincoma ukuhlamba ubuso kunye nenyama yesonka esiqhelekileyo. Isonka sifanele sibekwe emanzini kwaye, xa sinyulwe amanzi, sibeke ebusweni, sishiye imizuzu emithathu. Emva koko kuyimfuneko ukuhlamba ngamanzi afudumeleyo. Kwakhona unokuhlamba ngamanzi abandayo ngobisi obushushu (1: 1). Oku kuya kunceda ukugcina umswakama.
Akukho siphumo esibi siya kukunika isisombululo sokuhlambulula ubuso. Thatha igrama ezingama-20 ze-cologne, igramu ezingama-70 zamanzi kunye neekremu ezimbini ze-borax zichithwe khona kunye ne-5 gram ye-glycerin nobusi bendalo. Konke oku kuxutywe ngokupheleleyo. Isisombululo esinjalo singasetyenziswa ngaphambi kokufaka i-masic tonk.
Kwakhona, ioli ecocekileyo ihlambulula ilusu. Sithatha i-swab yekotoni kwaye siyihambisa emanzini abilisiwe, tyikitye ngokuphindaphindiweyo kunye ne-oist, kuphela kwioli. Emva koko unokusula ubuso bakho. Ngendlela, kuya kuba kuhle ukuba, emva kokuxubha, ushiye uluhlu lweoli kwilinen engama-1, uze uyisuse nge-cotton swab edibeneyo kwi-tea emnyama. Le nkqubo inconywa ukuba yenze yonke imihla ngaphambi kokulala.
Khumbula ukuba ngaphambi kokuba uphume esitrato, kufuneka usebenzise isicwisi esikhuselekileyo esincinci ebusweni bakho, kunye ne-tone remedy okanye powder.
Uninzi lwazo zonke, i-hsle, isikhumba esomileyo sizisa ngexesha lebusika. Ngenxa yokubanda ebusweni kukho i-ecdysises ephindaphindiweyo kunye nokuvuvukala kwimibala ebomvu. Ngoko ke, ebusika, umntu uyanconywa ukuba asuse nge-decoction kwimbewu ye-flax kwaye qi niqiniseke ukusebenzisa i-creams enomsoco, enokuthi ifake i-vitamin A. Kwakhona, kubusika, kucetyiswa ukuba, ngokuphindaphindiweyo, ukusebenzisa i-mask ebusweni obukhethekileyo (karatin).
Ngoko ke, makhe sijonge ukukhangela iifenki zolu hlobo lwesikhumba olomileyo. Zonke ezi zi-masking ziyakwazi ukulungiswa lula ekhaya.
Umaski we-apula kunye neqanda leqanda .
Sithatha i-apula entsha kwixabiso leenqanawa zeeqanda ezifanayo. I-yolk kufuneka ibethwe ngokutshatyalaliswa kude kube iifom, kunye ne-apula kufuneka ibhakikwe kwi-oven kwaye ihlanjwe kwaye ihlambuluke. Emva koko konke oku kufuneka kudibaniswe kwaye kuxutywe.
Mask of berries .
Kule maski, amajikijolo afanelekileyo afana ne-apula, ipereji, i-apricot, i-raspberry okanye i-strawberry. Kuxhomekeke kwizinto ezingaphezulu kwezidweliswe kwizandla zakho. Ngoko, thabatha amajikijolo kwaye uxoke okanye abathathu kwi-grater, uguqula ube yi-puree (ukuba kukho i-peel, kufuneka isuswe). Emva koko, faka 1 ithisipuni yesitashi kunye nekhilimu omuncu kwi-puree berry. Konke oku kuxutywe ngokufanelekileyo, de kube yinto efana ngayo.
Imaski yeqanda elimhlophe kunye nemon .
Thatha i-1 iqanda elimhlophe uze uyihlambe ngokuzeleyo size sithole i-foam. Emva koko faka i-teaspoon ye-juice yesantya esicatshulwa ngokutsha kunye netyuwa kwisiphande somthi. Konke oku kudibeneyo, kuze kube yilapho sifumana ubunzima bodwa.
Mask kusuka kwimvubelo .
Sithatha malunga nama-gram e-25 yemvubelo (kuyinqweneleka ukuba ihlambuluke) kwaye yongeza 1 ithisipuni yobisi. Konke oku kudibanisa ngononophelo uze ufumane ubunzima obukhulu, ukhumbule ukhilimu omuncu.
Mask of yolk yeqanda.
Thatha i-yolki yeqanda kwisixa sesinye kunye ne-whisk. Emva koko faka isipuni 1 se-oatmeal kunye ne-1 teaspoon yobusi bendalo. Konke oku kukuhle kunye nexesha elide kuze kube yilapho ubunzima buba buhlungu kwaye bubuhlungu.
Mask of juice utamatisi .
Thatha iipunipoli ezi-2 ezigcweleyo zetamatato uze udibanise kakuhle nge-2 tablespoons ze-oatmeal kunye ne-1 teaspoon ye-ukhilimu.
Amanqaku amabini alandelayo acetyiswa ukuba asetyenziswe ebusika.
I-Karatin i-mask kwinombolo 1 .
Thatha isipuni esisinye sezithako ezifana ne-oatmeal, ukhilimu omnandi kunye nejusi ye-carrot. Konke oku kucetyiswa ukuba udibanise ngokugqibeleleyo kude kube yinto efana ngayo.
I-Karatin mask yenombolo 2.
Thatha isipuni se-cottage ushizi kunye nekhefu kunye nokudibanisa kakuhle. Emva koko faka i-teaspoon ye-juice yesanti kwaye udibanise uze udibene.
Ngoko ke sijonge iimaski ezisisiseko kwesikhumba, esilungele ukoma. Zonke ezi maski zinconywa ukuba zisebenzise ii-2 ukuya kwezi-3 ngeveki kwaye zigcine imizuzu eyi-10-15.
Ubuso obuvela kwiphepha: Ubumnandi boTywala obushushu boButhathaka obusweni
I-Salmon kunye ne-fennel kunye nemon
Amaqanda aqhekezayo kunye ne-klabishi yama-kale kunye ne-Feta ushizi
IZityhilelo kwiluhlu lwamanani
Ngendlela eyiyo ukususa iinwele zeenwele?
Indlela yokuphucula imemori yengqondo
Ukunakekelwa ngoncedo: ama-anti-aging agents
Unokunyamekela njani izityalo zangaphakathi?